Ny tariby USB C izay mamaky haingana dia tonga amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Tonga hatrany amin'ny Apple Watch vaovao ny tariby USB C izay mamaky haingana
Any Cupertino dia manohy manohitra ny fampiharana ny port USB C amin'ny iPhone izy rehetra, manantena ny fampiharana azy isika fa tsy misy ... Tsara ny manana seranana tokana amin'ny fitaovana Apple rehetra fa amin'izao fotoana izao ny fahatongavan'i USB C dia mandaitra amin'ny sisa amin'ny vokatra ary amin'ity tranga ity dia ny Apple Watch Series 7, miaraka amin'ny famahana haingana.
Eny, ny maodely Apple Watch vaovao dia manampy rafitra famandrihana haingana izay azon'ny mpampiasa atao manana fiainana bateria 80% ao anatin'ny 45 minitra fotsiny. Midika izany fa izao famantaranandro vaovao izao dia mamela ny fitaovana ho feno 33% haingana kokoa noho ny maodely teo aloha.
Fahaleovan-tena tsara ary famahanana haingana kokoa amin'ny USB C
Ny tsara indrindra dia izao: Apple Apple vaovao dia manolotra androm-piainana hatramin'ny 18 ora araka ny Apple ihany ary nanampy ny hafainganan'ny famaranana amin'ny tariby USB C vaovao izay misy combo tonga lafatra. Etsy ankilany, zava-dehibe ny manamarika fa ity tariby USB C ity dia amidy misaraka ary dia mifanaraka tanteraka amin'ny sisa amin'ny Apple Watch hatramin'ny Series 1 fa tsy hanana vola haingana aminy ianao.
Ny fiampangana ny Apple Watch dia tsio-drivotra. Ary mahatratra 33% haingana kokoa ao amin'ny Apple Watch Series 7, izay mety hahatratra 80% ny vidiny ao anatin'ny 45 minitra. Mila mitondra ny mpampitohy akaiky kokoa ny endrika anatiny amin'ny famantaranandro ianao ary hikarakara ny zava-drehetra ny andriamby. Izy io dia rafitra voaisy tombo-kase tanteraka izay tsy misy ny fifandraisana miharihary. Tena mora ampiasaina koa izy io, satria tsy mila fampifanarahana tonga lafatra akory. Ny famandrihana haingana dia mifanaraka amin'ny Apple Watch Series 7. Ny maodely hafa dia maka fotoana mahazatra.
Ny tariby mamaly haingana haingana miaraka amin'ny mpampitohy USB C ho an'ny Apple Watch Manana halava 1 m sy vidiny ao amin'ny magazay Apple 35 euro. Amin'izao fotoana izao raha mbola manoratra ity lahatsoratra ity izahay, raha mividy tariby izao dia ho tonga ny 17 septambra, mieritreritra izahay fa hitombo mandritra ny herinandro ny tahiry ho an'ny fandefasana entana eo noho eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Tonga hatrany amin'ny Apple Watch vaovao ny tariby USB C izay mamaky haingana
IPad Mini vaovao, Apple's mini mandeha Pro
Ny iPhone 13 Pro sy iPhone 13 Pro Max dia mizara fakan-tsary mitovy